ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌနေရာအပါအဝင် ပါတီခေါင်းဆောင်များအား အသစ်ပြန်ရွေးချယ် - Yangon Media Group
ယင်းသို့ရွေးချယ်ရာတွင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးသာထွန်းလှ၊ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးတင်ညို၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးခိုင်ပြည်စိုး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁) ဦးအောင်မြကျော်၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) ဦးနှင်းထွန်းတိုး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး(၁) ဒေါ်ခင်စောဝေ၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး(၂) ဦးဦး သန်းနိုင်၊ စာရင်းစစ်(၁) ဒေါ်ခင်လှမြိုင်၊ စာရင်းစစ်(၂) ဦးဝင်းဇော်တို့အပါအဝင် ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စုစုပေါင်း ၂၅ ဦးကို အသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။
”ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကို ကျွန် တော်တို့ တက်ရောက်ကိုယ်စားလှယ်တွေ က မဲစနစ်နဲ့ အများသဘောတူ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်”ဟု ညီလာခံသို့တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကိုယ်စား လှယ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
အသစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းခံ ရသည့် ပါတီဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် ပါတီဗဟို ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောထားအား ဇွန် ၁ ရက် ညနေ ၆ နာရီခွဲခန့်အထိ မေး မြန်းခဲ့သော်လည်း အလုပ်များနေသည် ဟုဆိုကာ မေးမြန်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ကျင်းပပြီးစီးသွားပြီဖြစ်သည့် ရခိုင် အမျိုးသားပါတီညီလာခံတွင် ဦးဦးလှစော နှင့် ဒေါ်အေးနုစိန်တို့အပါအဝင် အဖွဲ့ ဝင် ကိုးဦးတို့ဖြင့် ပါတီ၏မူဝါဒရေးရာ ဦးဆောင်ကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပြီး အဆိုပါကော်မတီသည် ပါတီအမြင့် ဆုံးအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း လည်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ တရားဝင် ခရီးသွား?
သုတစွယ်စုံ စာပေဆုချီးမြှင့်ပွဲ ကျင်းပ၊ တစ်သက်တာဆုရှင် ဆရာကြီးမောင်ခင်မင်-ဓနုဖြူ အပါအဝင် ဆ??
အံ့အားသင့်ဖွယ် ဝိတ်ချပြခဲ့တဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ရူဒန်း